सत्ता जोगाउन सांसदलाई आईसियुमा बन्दी बनाईएको आरोप — donnews.com
सत्ता जोगाउन सांसदलाई आईसियुमा बन्दी बनाईएको आरोप
'अविश्वासमा मत दिन सक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी': कांग्रेस प्रवक्ता शर्मा
पोखरा । सत्ता जोगाउनका लागि फेरि पनि उहीँ पुरानो खेल दोहोरिएको छ । सांसद किनबेच र अपहरणका घटना नेपाली राजनीतिमा नौंला भने होइनन् । तर पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको मार्ग पछ्याउँदै गरेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ ओली भन्दा पनि अझै अगाडि देखिए ।
कोरोना नेगेटिभ भएका सांसदलाई पोजेटिभ भएको भन्दै अस्पतालको आईसियुमा बन्दी बनाईए पछि यो घटनाले सत्ता जोगाउन कतिसम्म तल गिर्छन् नेताहरु भन्ने पुष्टि भएको छ । विहानको रिपोर्टमा कोरोना नेगेटिभ आएका सांसदको दिउँसो १२ बजेपछि गुमनाम ढंगले एक्कासी पोजेटिभ देखिएको भन्दै सिधै आईसियुमा राखिएको थियो ।
आज गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा दोस्रोपटक छलफल हुँदै थियो । सत्ताच्यूत हुने डरले मध्यरातमा अधिवेशन नै अन्त्य गरेर काठमाडौं पुगेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सत्ता जोगाउन अनेकन् तिकडमहरु गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको समर्थनमा असाध्यै चर्को रुपमा प्रस्तुत हुने मुख्यमन्त्री गुरुङले ओलीलाई पनि माथ गर्दै सत्ताको चरम दुरुपयोग गरेका हुन् ।
एकातिर सांसद हराएको भन्दै बैठक रोक्न रोईलो थियो । सांसद खिमबिक्रम शाही सम्पर्कविहिन भएको भन्दै बैठक रोक्न प्रदेशसभा समक्ष राष्ट्रिय जनमोर्चाकी प्रमुख सचेतक पियारी थापाले निवेदन दिइन् । जसको आधारमा अर्को सूचना नआउँदासम्मको लागि भन्दै प्रदेशसभा बैठक नै स्थगित गरियो । यता सम्पर्कविहिन भनिएका सांसद शाही अस्पतालको आईसियु वार्डमा भएको तथ्य सार्वजनिक भयो ।
यस घटनालाई लिएर नेपाली काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अविश्वासको मत दिन सक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी भएको आरोप लगाएका छन् । काँग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले आफ्नो ट्वीटरमा ट्वीट गर्दै भनेका छन्–‘यो हेर्नुस् गण्डकी प्रदेश सांसद खिमबिक्रम शाहीको कोभिड परीक्षण नेगेटिभ आएको रिपोर्ट । स्वस्थ्य, तन्दरुस्त मान्छेलाई पृथ्वीचोकको चरक अस्पतालको आईसियुमा कसैलाई भेट्न नदिएर किन राखिएको छ ? उपचारको नाममा बन्दी ? अविश्वासमा मत दिन सक्ने नाममा सत्ता संरक्षित गुण्डागर्दी ?’